Manhajka - Axdiga Waxbarashada Shirarka
Arday kasta oo EOP ah oo ku jira Axdiga Wax-barashada Summitaanka waxaa la siiyaa gunno miisaaniyadeed oo ah $ 500 oo loo isticmaali karo in lagu iibsado manhajka iyada oo loo iibgeeyayaashayada horay loo oggolaaday:
RainbowResource.com iyo Timberdoodle.com
Sardeyda ka diiwaangashan wixii ka dambeeya Sebtember 1 waxay heli doonaan qaddar horay loo qiimeeyay. Waxaan taageereynaa xulashooyinka manhajka ee buuxiya heerarka asaasiga ah ee manhajka aasaasiga ah.
Daabacayaasha caanka ah waxaa ka mid ah: Saxon, Singapore Math, Math – U – See, Evan – Moor, Spectrum, All About Learning Press, Explore the Code, IEW, and Learning Without Tears.
Cusub oo loogu talagalay sannadka 2020 - 21 sano dugsiyeed: waxaan hadda bixinaynaa ikhtiyaar buuxa Manhajka manhajka kaas oo adeegsanaya manhajka Calvert. Ardayda isdiiwaangashan wixii ka dambeeya Sebtember 1 waxay heli doonaan qaddar la soo saaray oo ku saabsan miisaaniyadda manhajka taas oo saameyn ku yeelan karta awoodda isqorista barnaamijkan haddii laga bilaabo goor dambe oo sannad dugsiyeedka ah.
Barnaamijyada Khadka tooska ah
Intaa waxaa sii dheer, ardaydu waxay marin u heli doonaan barnaamijyo dheeraad ah oo khadka tooska ah ah sida Akhriska Eggs, Math Seeds, NewsELA, Khan Academy iyo MobyMax - waxaan nahay iskuul internetka ah, ka dib oo dhan.
Mawduucyada Muhiimka ah ee Shabakada
Haddii waalidku doonayo in ardaygu si buuxda uga diiwaangaliyo barnaamijka qadka tooska ah, waxaan hada bixinaa maaddooyin muhiim ah iyadoo la adeegsanayo barnaamijka Calvert ee fasalka K-5, iyo Beast Academy ee Xisaabta ardayda fasalka 3aad +.
Dhammaan agabyadu waxay iska leeyihiin qoyskaaga haddii aad sii waddo diiwaangelinta sanadka oo dhan. Si kastaba ha noqotee, haddii aad dooratid inaad ka baxdid barnaamijkeena inta sanadka lagu jiro, waxaan kaa codsaneynaa inaad soo celiso dhammaan agabyadii si aad u eegis ugu sameyso oo aad mustaqbalka dib ugu adeegsan karto maktabaddayada.
Ardayda naga diiwaangashan bisha Diseembar ee sannad-dugsiyeedka sidoo kale waxay codsan karaan $ 300 oo dheeri ah si ay gacan uga geystaan ​​bixinta kharashaadka ka baxsan, kaas oo loo qaybin doono qaab magdhow ah marka la helo tilmaamo gaar ah.